Nepal Deep | पूर्वराजदूत रायको दाबी: नेपालीले स्वीकार्न नचाहे पनि नेपाल भारतखण्डकै हिस्सा !
पूर्वराजदूत रायको दाबी: नेपालीले स्वीकार्न नचाहे पनि नेपाल भारतखण्डकै हिस्सा !
काठमाडौँ। नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत रणजित रायले नेपालीहरुले भारतसँगको बहुआयमिक सम्बन्धलाई नजरअन्दाज गर्ने गरेको बताएका छन्। यही सेप्टेम्बरमा प्रकाशनोन्मुख कृति ‘काठमाडौँ डिलेमा: रिसेटिङ इण्डिया-नेपाल टाइज’ मा नेपाल र भारतको जस्तो नजिकको सम्बन्ध अरु कुनै छिमेकी राष्ट्र बीच नहुने भए पनि त्यहिँ सामिप्यताले गर्दा दुई राष्ट्रहरु बीच जटिल समस्या पनि देखिने गरेको बताएका हुन्।
भारतीय पत्रिका दि प्रिन्टमा प्रकाशित उक्त पुस्तकको एक अंशमा रायले भारत बिना नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व अस्तित्व नरहेको दाबी गरेका छन्। उनले नेपालको भिन्दै राष्ट्रिय पहिचान के हो भनेर पनि प्रश्न गरेका छन्। उनले भारतसँग भिन्न रहेको देखाउन नेपालले प्रस्तुत गर्ने दुई कुराहरु- भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि र सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपालको मात्रै नभएर साझा भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले बुद्धको जन्मस्थल भारतमा बौद्ध धर्मको परम्पराले गर्दा भारतसँग नजोडी सम्भव नभएको उनको तर्क छ। त्यस्तै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पनि नेपालको आफ्नै नभई चीनसँग साझा भएको लेखेका छन्।
रायको धारणा छ, ‘नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय पहिचान के हो? यो भारतबाट कसरी भिन्न छ? आकार र जनसंख्यामा भिन्नता, भारतसँग तिन दिशामा सिमा जोडिनुले भारतबाट घेराबन्दी भएको मानसिकता र त्यसलाई तोड्न चाहने इच्छा। नेपालीहरु भारतसँगको आफ्नो पूर्ण निर्भरतालाई पनि मन पराउँदैनन् र तिरस्कार गर्छन्। र, उनीहरु भौगोलिक तथ्यलाई अस्विकार गर्ने प्रयत्न गर्छन! नेपालले आफू भारत भन्दा भिन्न देखाउनको लागि अगाडी सार्ने कुराहरु भनेको बुद्धको जन्मस्थान र संसारको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथा हो। दुर्भाग्यवश, नेपालले आफ्नो भिन्दै अस्तित्व प्रमाणित गर्न अघि सार्ने यी कुराहरु उनीहरुको मात्र होइनन्। ती साझा हुन्। बुद्धको जन्मथलो बारेको दाबी भारतको बौद्ध परम्पराको एक हिस्सा हो। र, सगरमाथा पनि नेपाल र चीनको साझा हो।’
रायले नेपालीहरुले जति नै आँफूहरुलाई भारतबाट अलग देखाउन खोजेपनि कुनै पनि धार्मिक कार्य गर्दा नेपालीहरुले नेपाल भारतखण्डको एक हिस्सा भएको संकल्प गर्ने गरेको लेखेका छन्। नेपालीहरुले आफूहरु भारतबाट भिन्दै नभएको तथ्य स्वीकार्नमात्र नसकेको पनि भनेका छन्। नेपालको सबै कुरा भारतसँग मिल्ने भएपनि उनीहरुले त्यो तथ्यलाई अस्विकार गर्ने गरेको लेखेका छन्। उनले भारतलाई नस्वीकार्ने प्रवृति काठमाडौँ उपत्यकामा व्याप्त रहेको पनि लेखेका छन्।
रायले लेखेका छन्, ‘सायद नेपाल र भारत बीच सबैभन्दा घनिष्ठ र त्यति नै जटिल सम्बन्ध छ। लाग्छ, कुनै पनि दुई छिमेकी देशहरु बीच यस्तो सम्बन्ध हुँदैन। धार्मिक, संस्कृतिक, परम्परागत, भाषिक तथ्यहरु जसले हाम्रो सम्बन्ध जोडेको छ तिनै कुराहरुले तनाव पनि सिर्जना गरेको छ। यहाँ सम्म कि प्रत्येक हिन्दुले धार्मिक संकल्प वा प्रतिज्ञा लिने क्रममा नेपाल भरतखण्डको हिस्सा भएको रूपमा उल्लेख गर्दछन्! यदि नेपालको सबै कुरा भारतसँग मिल्छ भने नेपाललाई के कुराले एक भिन्दै राष्ट्र-राज्य बनाउँछ? कहिलेकाहीँ नेपालीहरुले भारतसँग सांस्कृतिक समानताहरु भएकोमा विषाद भाव प्रकट गर्छन, विशेष गरी जब भारतीयहरुले त्यस तथ्यबारे बोल्छन्। यस्तो विचारले नेपालीलाई नै प्रतिकूल असर पर्नेछ।’